Faahfaahin doonidii ku degtey duleedka dekada magaalada Boosaaso (Sawiro) – SBC
Faahfaahin doonidii ku degtey duleedka dekada magaalada Boosaaso (Sawiro)
Dooni u rarneyd ganacsato reer Puntland ah ayaa habeenimadii xaley ku degtey duleedka dekada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ka dib makii mowjado dabeyl ah ay ku dhufteen.
Doonidan ayaa lagu magacaabaa AL-CABUUD waxaana laga lahaa wadanka Pakistan waxay ka soo ambabaxdey wadanka Cumaan iyadoo alaabo kala duwan u wadey magaalada Boosaaso, alaabahaasi oo ay iska lahaayeen shirkado waa weyn oo fadhigoodu yahay Boosaaso.
Wasiirka Amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa sheegay in doonidan markii ay ku soo dhawaatey xeebta magaalada Boosaaso ay ku dhufteen dabeylo xoogan taasi oo keentey inay jihadii ka dhunto ayna dhagaxaanta badda ee Jamalada ku dhacdey, waxaana uu sheegay in doonidii ay u kala jabtey laba cad, isla markaana biyo xoogan ay soo galeen taasi oo keentey inay badda ku dhex degto.
Dhamaan shaqaalihii saarnaa doonidaasi oo u dhashay wadanka Pakistan ayaa la soo badbaadiyey, waxaase la caymin hantidii doonidaasi saarneyd, iyadoo gurmad xoogan la isku dayey balse aanay suurtagalin in doonida la badbaadiyo.
inaa lilahi wa inaa ilayhi rajucun wan uga tacsiyaynaya dadka somaliyed o khasaruhu ka so garay waxana leyahay samir ilahay ha inaka siyo
bacda salaan waxaan u tacsiyaynayaa ganacsatadii ay donidaasi u rarayd waxaana ledahay ilahay bedel khayr qaba ha idinku bedelo hantidas idinka khasaartay, intas ka dib weriyaha maqalkan qoray ee ah Mohamed Ali Iman waxan ku oranlaha walaal weriye umadeed ayad sheganeysa fadlan sida wax u jiraan usheeg ama ka amus umada been ha usheegine, wayo anigu si qoto dheer ayan ula socdey donida iyo waxa saran ila marki aya so baxday ila mantadas, donidu jiha kama lumin ee hadii si saxa warka loo dhigo hantidaas iyo donidaba waxaa lagu leyahay maamulka puntland waayo doontu iyadoo dekeda ku xiran ayey qori caaradiis ku fureen weliba iyadoo uu nakhudihii magaalada ku maqanyahay wiilashii baxaarida ahaa aya baqdin awgeed u kaxeeyey sidas ayeyna wax udhaceen, waxaa kaloo jirta markab dekeda xoog loogu haysto arimaha markabkaas ma faahfaahinayo wayo waa wax laga naxo arimaha lagu haystaa, marka waxaan oranlaha mesha maamul iyo kala damayn hadi aysan ka jirin fadlan yaan umada la lugoyne runta ha la isu sheego, amni xumadii matanba ka damaysey, wa layaab, burcad badeeda la radinaya malaha mamulkeyba hoos jiiftaa. war waxbadanbaa khaldane ha la isi sax, idinkuna sida wax ujiraan usheega ama iska amunsa fadla.
wadina dalkiisa jecel
walaal salan kadib doonta ma dagiin ee jamalo ayeey fuushay markaa walaal wixi xaqiiq ah ka hadlaa fadlan